Amabhanqa asebenza kabusha adinga ukufakwa esikhundleni sakhona ngokungavamile, ngoba ahlala isikhathi eside ngokwedlulele. Amancengesi okuncela aqinisekiswa njengamadivayisi wokulinganisa ngokunemba kuka- +/- 100ml. Ama-Canisters afakwe kubakaki abakhelwe ngaphakathi bokufakwa ezindongeni, izisekelo zesitimela noma izinqola. Ama-Canisters afaka izixhumi ze-engeli ezisebenzisekayo zokuthambisa ishubhu.
Alahlwayo ukuncela Isikhwama B
Idizayinelwe ukuhlinzeka ngokusebenza okuphezulu nokulula ukusetshenziswa, izikhwama zokudonsa zitholakala ngosayizi we-1000ml no-2000ml. Zenziwe ngefilimu le-polyethylene elincanyana nokho eliqinile, elenza uhlelo luphephe, luhlanzeke futhi luhlale isikhathi eside. Izikhwama zokudonsa azinayo i-PVC futhi zisebenzisa upulasitiki omncane kakhulu kunemikhiqizo efana naleyo. Ukunciphisa inani lamapulasitiki ekukhiqizeni kwenza izikhwama zokudonsa zibe lula kakhulu futhi zivumele ukuthi zilingane endaweni encane lapho zihlanganisiwe. Lokhu kudala ukusebenza kahle kwempahla kanye nokunciphisa ukukhishwa kwe-CO2.
Alahlwayo ukuncela Isikhwama A
Isistimu yokudonsa evaliwe enenkinobho ye-PUSH BLOCK ukunciphisa ubungozi bokutheleleka.
2.Wesibili 360°i-adapter ye-swivel inikeza induduzo ephelele nokuguquguquka kwabo bobabili abaguli nabahlengikazi.
Imbobo ye-Irrigation ifakwe i-valve yendlela eyodwa ivumela u-saline ojwayelekile ukuhlanza i-catheter kahle.
Imbobo ye-4.MDI yokulethwa kwezidakamizwa okuphumelelayo, okusheshayo nokulula.
I-5.Kukhonjiswa ukusetshenziswa okuqhubekayo kwamahora angama-24-72.
Ilebuli yesineke enezitika zosuku lweviki.
7.Sterile, ngazinye Peel izikhwama.
Umkhono we-catheter othambile kodwa oqinile.
1. I-catheter yokudonsa i-Yankauer ivame ukusetshenziswa kanye nethubhu yokuxhuma, futhi ihloselwe ukuncela uketshezi lomzimba ngokuhlangana ne-aspirator ngesikhathi sokuhlinzwa emgodini we-thoracic noma kwisisu.
2. Isibambo seYankauer senziwe ngezinto ezisobala zokubona kangcono.
3. Izindonga ezishubile zethubhu zinikeza amandla aphezulu kanye ne-anti-kinking.
Alahlwayo ukuncela Isikhwama D
Ukusetshenziswa okukodwa kuphela, Kuvinjelwe ukusetshenziswa kabusha.
2.Inzalo nge-ethylene oxide ayisebenzisi uma ukupakisha kulimele noma kuvuliwe.
3.Store ngaphansi komthunzi, opholile, owomile, onomoya futhi ohlanzekile.